Guddoomiye Mursal oo ka hor imaaday amar horey uga soo baxay ku xigeenkiisa | SMC
Home WARARKA MAANTA Guddoomiye Mursal oo ka hor imaaday amar horey uga soo baxay ku...
Guddoomiye Mursal oo ka hor imaaday amar horey uga soo baxay ku xigeenkiisa
Muqdisho (SMC) – Maxamed Mursal Shiikh Cabdiraxmaan oo ah Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa qaatay go’aan ku saabsan inuu shaqada u fasaxo Guddiga Maaliyadda ee Baarlamaanka.
Guddigaan ayaa waxaa horey u kala diray Guddoomiye Ku xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka oo soo saaray waraaq.
Guddoomiye Mursal ayaa shaqada u fasaxay Guddigaan oo horey loo sheegay in kala diray taasoo ay ka dhalatay muran badan.
Guddiga Maaliyadda ee golaha shacabka Soomaaliya ayaa dood badan ka dhax dhaliyay fadhiga Baarlamaanka sifoo kale waxay mudo maalmo walaac ah geliyeen xukuumada kadib markii ay ku eedeeyeen musuq maasuq.Lama ogo haddii Guddoomiye Mursal uu arrintaan la ogyahay ku xigeenkiisa oo horey u kala diray guddigaan.
Previous articleUhuru oo khudbadiisa QM dalab culus oo ku saabsan kiiska badda ugu gudbiyey Farmaajo
Next articleMaamul Cusub oo loo Magacaabay Magalada Baydhabo